Frantsa-Senegal: Nosamborin’ny Polisy Frantsay Ireo Mpanao Fihetsiketsehana Tsy Mankasitraka An’i Wade · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Jolay 2011 16:37 GMT
Fihetsehana iray nantsoina hoe “Ampy izay tena Ampy izay” (Y en a marre) [fr] niseho voalohany tao amin'ny tranonkala ary niely tamin'ireo tanora izay nanao fihetsiketsehana tamin'ny 19 Martsa 2011, nanohitra ny tsy fisian'ny asa, fahatapahan'ny herinaratra sy ireo pôlitika ankapoben'ny governemanta Wade.
Ny 23 jona, fanoherana sy tabataba indray no nanakoako eran'i Dakar, nanohitra ny fanovàna ny lalàmpanorenana izay mety hanome vahana ny filoha ka ho lany indray amin'ny ampaham-bato 25% monja, ary mety hanome toerana vaovao ho an'ny filoha lefitra ao amin'ny fahefana mpanatanteraka.
Tamin'io andro io ihany, fihetsiketsahan'ireo teratany senegaly monina any Frantsa izay niangona nanoloana ny masoivoho Senegaly sy ny ‘consulat’. Tsy ela dia noravàn'ny polisy ireo mpanao fihetsiketsehana. Vokany, Madmadou, mpampiasa Twitter iray monina ao Parisy, dia namoaka ity fanavaozam-baovao manaraka ity avy amin'ny fanoherana:
Ao amin'ireo sary manaraka nalefanà mpampiasa iray ihany, ireo teratany Senegaly dia niangona nanoloana ny masoivoho, voahodidin'ny fiaran'ny polisy Frantsay:
Tranonkalam-baovao Senegaly, Walf Fidjri [fr], nanazava fa olona 200 no voasambotra tao amin'ny masoivoho, ary 31 hafa tao amin'ny consulat.
Lahatsary iray momba ny tranga nisy tao amin'ny consulat no naseho tao amin'ny Dailymotion, etsy ambanin'ny mombamomba ny Antoko Sosialista ao Senegal. Tazana ao amin'ny consulat ireo mpanao fihetsiketsehana, ary tazana mijoro eo ambavahady ireo manampahefan'ny polisy Frantsay, manohana ireo mpanao fihetsiketsehana tsy hiditra:
Occupation du Consulat du Sénégal à Paris contre… avy amin'ny socialisme-republique
Ny tomponandraikitra ao amin'ny consulat-n'i Senegal ao Parisy dia nametraka fitrainana [fr] momba ny fahapotehana naterak'ireo mpanao fihetsiketsehana nandritra ny hetsika.